Riandranon'i Goa Rang-Reng, Bali, Indonezia " Journey-Assist - Mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Goa Rang Reng riandrano
Ranon-dranomaso Goa Rang-Reng
Topimaso amin'ny riandrano
Any amin'ny 30 km atsinanan'ny Denpasar no misy azy ary tena akaiky an'i Ubud. Ny tanàna akaiky indrindra amin'ity riandrano ity dia Gianyar, izay itratan'ny reniranon'i Kankir.
Ny anaran'ny riandrano dia avy amin'ny lava-bato misy an'io anarana io ihany, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe "zohy maro loko" noho ny famirapiratan'ny rano sy ny vatolampy manjelanjelatra. Ny reniranon'i Bettinsky sy ny reniranon'i Bangunlemakh dia mitambatra eo anilany. Ao anaty lava-bato dia mivondrona izy ireo ary mamorona renirano tokana antsoina hoe Kankir. Ao amin'ny vato, mikoriana manaraka ny renirano izy - ity ny riandranon'i Goa Rang-Reng.
Io dia an'ny riandrano karazana cascade malemy. Ny haavony dia tsy mihoatra ny 20 m, ny halavany dia 30 m. Ity riandrano ity dia misy renirano 2. Ny iray amin'ireny, ny iray dia any ambony ary ny iray kosa any ambany. Ny renirano dia voahodidin'ny harambato feno rakotra lumotra matevina. Vatan-kazo nariana avy teo amin'ny banky iray ka hatramin'ny iray hafa. Manampy amin'ny fivezivezena tsara amin'ny rano sy ambonin'ny vatolampy izy ireo, satria azon-tanana atao ireo tanana ireo Tsy sarotra ny fiakarana mankany an-tampony. Vonona hisintona tady manokana ho an'ny mpizahatany ny mpiasa eo an-toerana.
Misy faritra fialamboly eny amoron-tsiraka. Mahafinaritra azy ireo ny mandeha, mipetraka, mandainga. Afaka matory amin'ny tranokala toy izany ianao amin'ny feon'ny rano milatsaka. Ary koa, ny piknikika dia matetika atao eto. Akaikin'ny tampon'ny tampon'isa dia misy lagonosy kely mety milomano ao aminy, toy ny amin'ny fandroana.
Ny vola miditra amin'ny faritry ny riandrano dia 20 000 ropia.
Sarin'ny riandrano Goa Rang Reng
Riandranon'i Goa Rang-Reng (vanim-potoana lehibe)
riandrano Goa Rang Reng eo amin'ny sari-tany
Riandranon'i Goa Rang-reng amin'ny sari-tany